IPATIO YEGRASS EYENZIWEYO (IIPROS & CONS) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi IPatio yeGrass eyenziweyo (Iipros & Cons)
Nasi isikhokelo sokuyilwa kwengca yokufakelwa kwengca kubandakanya okuyiyo, ukulunga kunye nokubi, iindleko kunye neentlobo ezilungileyo zepati yakho yangasemva, iveranda okanye ibhalkhoni.
Akukho nto ingcono kunokuhamba ngaphandle kwaye wonwabele inkangeleko yengca eluhlaza. Nangona kunjalo, ukuba nengca yokwenyani kwipatio yakho kuza nezinye iingxaki.
Kokunye, kuya kufuneka ubeke iinzame ezininzi ukuze uqiniseke ukuba iyadi yakho ihlala ilungisiwe kwaye isempilweni njengokucheba, ukunkcenkceshela nokuchumisa. Ngaphezulu, kunzima ukugcina ingca ibonakala ilungile unyaka wonke.
Ukuba ufuna isibheno sengca ngaphandle komzamo ofanayo, ungahlaziya ipatio yakho ngengca eyenziweyo. Kwesi sikhokelo, siza kuqhekeza yonke into ekufuneka uyazi ngayo ingca eyenziweyo kwipatio yakho.
Yintoni ingca eyenziweyo yePatio?
Ingca yenkohliso yePatio Pros kunye neNgxaki yayo
Grass patio Ixabiso
Ingca egqibeleleyo yenkohliso yePatio
Ingca eyenziweyo yepatio yenziwe ngeentsinga zokwenziwa ukuze zifane nengca yendalo. Izinto zokuqala ezisetyenziselwa ukwakha ingca eyenziweyo yi-polyethylene, i-polypropylene kunye nenayiloni. Kukho izizukulwana ezithathu zengca eyenziweyo kunye nokwahluka okutsha kokumelana ngakumbi nokukhanya kwe-UV kunye nokunxiba nokukrazuka.
Ukongeza ingca yendalo kwipatio yakho yindlela entle yokuqhekeza imibala, ukongeza umbala, kunye nokongeza indalo kwipatiyo yakho. Ingxaki kuphela kukuba oku kunokunyusa kakhulu ukugcinwa kwepatio yakho kunye nokubandezeleka kwiinyanga ezibandayo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna izibonelelo zengca ngaphandle kwesondlo, unokhetho olusebenza kakuhle. Kulapho ingca yokufakelwa ingena khona kwiipatios. Ngale ndlela, ungafaka i-turf eyenziweyo ebonakala njengengca, inika ipatio yakho ukubukeka okutsha ngaphandle kokukhathazeka malunga nokugcinwa okuqhelekileyo okubandakanya ingca yendabuko.
Ngotshani obungeyonyani, ungazisebenzisa izibonelelo zengca ngaphandle kokukhathazeka malunga nokukhupha umatshini wokucheba ingca rhoqo ngeempelaveki.
Inxalenye enkulu yokwenza nasiphi na isigqibo sokulungiswa kwekhaya kukujonga hayi kuphela izibonelelo kodwa izinto ezingalunganga ezinokuthi zilungiswe kwakhona. Njengalo naluphi na olunye uvuselelo lwasekhaya, ingca engeyiyo eyokwakha ipatio yakho iza nezinto ezilungileyo nezingalunganga, zombini esi sizakuthatha umzuzwana ukuba sizophule apha.
Ingca yenkohliso kwiPatio Pros
Ukugcinwa okuphantsi - Masiqale ngemiba elungileyo. Isinye, isibheno sobuhle bengca engeyonyani siyacaca. Ukubonelela ngalo lonke uyolo lwengca eluhlaza ngelixa ungadingi kulondolozo olubanzi oluza nengca yokwenyani.
Akukho zinambuzane okanye izichumisi ezifunekayo -Ingca eyinyani iya kugcina ukubonakala kwayo okunempilo kunye nokuzilungisa ngaphandle kwesidingo samanyathelo njengokucheba okanye ukunkcenkceshela. Oku kukwathetha ukuba awuzukusebenzisa ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane okanye izichumisi ezinokuthi ngamanye amaxesha ziza nolondolozo lwengca yokwenyani.
Yoma ngokukhawuleza Ukongeza, unokuxhomekeka kwingca eyenziweyo ukuba yome ngokukhawuleza emva kwemvula. Oku kuthetha ukuba ungonwabela ipatio yakho nangaliphi na ixesha ngaphandle kokukhathazeka.
Ihlala ixesha elide Ingca eyenziweyo ihlala ihleli ixesha elide kunengca yemveli. Oku kuthetha ukuba ukuba uneenyawo ezininzi zokuhamba ngeenyawo kwipatio yakho okanye iya kuba yindawo apho abantwana badlala khona, akunakufane ubone ukonakala kunye noluhlu lomsebenzi oluza kubonisa kwingca yendalo.
Inja kunye neekati zingayisebenzisa ukuchama kunye nokungcolisa - Into entle ngengca eyenziweyo xa ithelekiswa nengca yendalo kukuba izinja kunye neekati zingayisebenzisa ukuchama kunye nokungcola ngaphandle kokuyonakalisa.
Kuya kubakho ulondolozo olufana nokuhlamba nawuphi na umchamo kunye nokuchola amanyundululu. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nengca yokwenyani ayizukukhupha umbala kwaye ife. Ukunceda ukususa naliphi na ivumba lomchamo wesilwanyana sasekhaya kwingca yakho eyenziweyo umntu unokusebenzisa enye yekati kunye nenja iimveliso zokususa ivumba langaphandle.
Ingca yenkohliso kwiPatio Cons
Okwangoku, kukho iingxaki ezithile kwingca eyenziweyo ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuba uyongeze kwipatiyo yakho. Ezi ziindawo zorhwebo ekufuneka uzazi.
Ungashushu - Ngemini eshushu, uyakufuna ukulumkela ipatio yengca eyenziweyo. Elangeni, iyakwazi ukufudumeza kwaye ihlala ishushu kunomoya ojikeleze indawo. Iindaba ezimnandi zezokuba oku akuyonakalisi ingca engeyiyo eyokwenyani njengoko kungonwabisi nje phantsi kweenyawo ukuba awunxibanga zihlangu.
Ukwenziwa kwemichiza kunye nokucinywa kwegesi - Enye into exhalabisayo ngengca eyenziweyo imalunga neekhemikhali ezichaphazelekayo. Kukho ezinye iinketho zengca ezingezizo ezisebenzisa imichiza engqwabalala kunezinye, nangona kunjalo, licebo elihle ukwenza uphando lwakho kwinkampani ocinga ukuyithenga kuyo ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela kukhetho lwakho lwengca eyenziweyo.
Enye into exhalabisayo ngengca eyenziweyo kukuba xa kunethayo, iikhemikhali kwingca eyenziweyo zinokukhokelela ekubalekeleni kwimithombo yamanzi ekufutshane. Oku kuyingxaki ngokukodwa xa imozulu inzima njengemvula enkulu okanye iindudumo.
Jonga le patio yengca ingeyiyo enemingxunya yokuhambisa amanzi kuyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ngaphandle kokwazi nje ubuhle kunye nobubi bezinto, kubalulekile ukwazi ukuba ipatio yengca eyenziweyo iyasebenza nohlahlo-lwabiwo mali.
Ingca eyenziweyo ihlala ithengiswa kuluhlu oluhlala phakathi kwe- $ 5 kunye ne- $ 20 ngeenyawo zenyawo nganye ngomyinge wama- $ 12.50. Ewe, eli xabiso lingahluka ngokuxhomekeka ekubeni uyifumana phi ingca yakho eyenziweyo kunye neendleko zokufaka ezahlukeneyo.
Oku kubiza kakhulu kunokubeka isod engabiza imali engaphantsi kwedola ngonyawo wesikwere. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kuthatha kuphela iindleko zangaphambili zezinto, hayi ukugcinwa kwazo ngokuhamba kwexesha.
Ezi ndleko zongezelelekileyo zinokongeza ngokukhawuleza kwesoyi enikwe inqanaba lokugcinwa kwengca ephilayo. Ingca eyenziweyo ineendleko eziqhubekekayo ezimbalwa ngokubhekisele kulondolozo, iyenza ukuba ibe notyalo-mali olufanelekileyo.
Unokukhetha okuninzi xa kufikwa ekuthengeni ngeenxa zonke ngengca eyenziweyo yepatio yakho. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba sonke isigqibo sifana nesokugqibela. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uqaphele ezinye zezona zikhetho zibalaseleyo kwiimpawu onazo xa kufika ixesha lokujonga ngeenxa zonke kukhetho lwengca eyenziweyo.
Njengoko besesitshilo, uya kufuna ukukhangela into enobuhlobo kokusingqongileyo ukunciphisa umququ wekhabhoni oza kuba nengca yakho eyenziweyo.
Ewe uyakufuna into eyomeleleyo nayo. Ngale ndlela, ingca yakho eyenziweyo iya kuhlala ithutyana. Ukuqinisekisa ukuba ingca yakho eyenziweyo iyawugcina umbala wayo odlamkileyo kwiminyaka ezayo, licebo elihle ukukhetha ingca eyenziweyo ebonisa ukhuseleko lwe-UV.
Olunye uluvo oluya kuthathelwa ingqalelo bubunjani bokhetho lwengca eyenziweyo embuzweni. Ukuba kunokwenzeka, kungcono ukhethe ingca eyenziweyo ethambileyo kumava anyanisekileyo. Kwaye kuya kulunge ngakumbi ukuhamba xa ukhe ufune ukuchitha ixesha kwipatio yakho engenazihlangu.
Okokugqibela, ukufakelwa kwe-turf yakho eyenziweyo, ngelixa ulandela itemplate ngokubanzi, kungahluka phakathi kokukhetha. Ukuba ufuna ukugcina iprojekthi ngokuthe tye kangangoko kunokwenzeka, kungcono uqwalasele ingca eyenziweyo enexesha elilula lokufaka.
Jonga le Pet Grow PG1-4 yombhoxo wengca owenziweyo e Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Eyona ngca ingeyiyo eyokufakelwa yiPet Grow PG1-4 yombhoxo wengca owenziweyo. Oku kunokumiswa apho uyifunayo ngaphandle kokukhathazeka ngofakelo olusisigxina.
Jonga le 5ft x 8ft yemveliso yengca eyenziweyo e Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ukhetho olukhulu kwipatio okanye kwi-balcony yi-Petgrow eyenziweyo yengca eyenziweyo yengca. Le mveliso iza ipakishwe kwi-5ft nge-8ft roll. Yenzelwe imingxunya yokuhambisa amanzi kunye nezinto ze-polypropylene kulula ukuzicoca.
Ngolwazi oluthe kratya jonga kwinqaku lethu malunga ingca engeyiyo eyokujikeleza iphuli .
iingoma zokuhamba ezantsi kwindlela eya kwilizwe
ilokhwe yomtshato nebhinqa elimsobo
iingoma zomtshato ukuphuma ukuya kwindibano
iisuti zepant yomtshato kubafazi